ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: June 2012
မြန်မာစစ်သား (Burma Soldier) မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်မှ ဦးမျိုးမြင့်ကို သူ့ဘ၀ဖြစ်စဉ်ကို ရိုက်ကူးခဲ့ပုံနဲ့ သူ့ရဲ့ အကျဉ်းထောင်တွင်းဖြတ်သန်းမှု၊
http://www.burmasoldier.com Interview with Burma Soldier (part-1) Interview with Burma Soldier (part-2)
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:45 PM2comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 1:15 AM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 5:48 AM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:13 PM 1 comment :
May your happy Birthday be happy, healthy, wealthy and getting present peace and harmony in every Conner of the world. May you be free from all kinds of suffering and miseries. May you be attained the realization of Nibbana as to the final goal of life.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှု ပုံရိပ်လွှာမှတ်တမ်း
စာရေးသူ Unknown အချိန် 12:24 AM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:09 PM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:29 PM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:16 PM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:26 PM No comments :
ရွှေဘ၏ ဘဝနှင့် အနုပညာရုပ်ပုံလွှာ
ဦးသန့် – တက္ကသိုလ်စိန်တင်
ရွှေဥဒေါင်း - တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးအခေါ်များ
ရာပြည့်ဦးစိုးညွန့် - ဗန်းမော်တင်အောင် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
သုသေတီမြင့်ထွန်း - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အမွိုင်သို့လျှို့ဝှက်ခရီး
ဥက္ကဋ္ဌကြီးနိုင်ရွှေကျင်နှင့်တော်လှန်ရေးသမား-ဒို့မွန်ကျောင်းသား-ပထမတွဲ – နိုင်ဖေသိန်းဇြာ
အနာဂတ်နိ်ုင်ငံတော်သား – သခင်မြသန်း
မိုးဟိန်းကို - ဂူလီယံနီနှင့်အမေရိကကိုပြောင်းလဲခဲ့သောနေ့
မှော်ဘီဆရာသိန်း – တိုက်စိုး
ဦးရွှေအုံး ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ
သော်တာဆွေ - ကျွန်တော့်ဘဝဇာတ်ကြောင်း
ဝင်းဝင်းမြင့်(နန်းတော်ရှေ့) - ပန်းတပွင့်ရဲ့ရင်ခုန်သံ(ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမေရှင်)
ဆွေမင်း(ဓနုဖြူ) - ဘဝတခုအမှတ်တရ
ပေါ်ဦးသစ် - ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော လေးဖြူ
ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်၏ ကြိုးစင်ပေါ်မှမှတ်တမ်းများ - အိုးဝေထွန်းအောင်နှင့် ဦးစံရွှေ
စာရေးသူ Unknown အချိန် 11:12 PM No comments :
တံဆိပ်များ စာအုပ်များ , သမိုင်းအစအန